Photoshop PSD Qalabka Soo kabashada. PSD Dayactirka Software. Dayactir Photoshop.
DataNumen PSD Repair waa ugu fiican Dayactirka Photoshop iyo qalabka soo kabashada adduunka. Waxay dayactiri kartaa Photoshop musuqmaasuq ama waxyeello soo gaadhay PSD iyo faylalka sawirka ee PDD iyo soo kabashada inta ugu badan ee xogtaada intii suurtagal ah, taas oo yareyneysa luminta musuqmaasuqa faylka.
4.90 / 5 (laga bilaabo 1,632 cod)
maxaad DataNumen PSD Repair?
Gacaliye DataNumen shaqaalaha
Waan kuugu mahadcelinayaa samaynta "DataNumen PSD RepairWaxaan haystay mid duug ah
feyl aan hayay ilaa 2000. Waa la abuuray
feylkii aan hayay ilaa 2000. Waxaa laga abuuray
PhotoDeluxe, qaab PDD ah Photoshop ma aqrin karin.
Wax fikrad ah kama lihid sida aan ugu faraxsanahay inaan dib u eego, soo dejiyo, oo aan ku guuleysto
dib ugu cusbooneysii software-kaaga faylkan keliya.
Noocyada Muhiimka ah ee DataNumen PSD Repair v2.9
Taageero soo kabasho PSD iyo faylasha PDD oo ay soo saareen dhammaan noocyada Adobe Photoshop.
Taageero si loo soo celiyo sawirka iyo sidoo kale lakabyada kala duwan.
Taageero soo kabashada pixels, cabirka, qoto dheer midabka iyo palette ee sawirka iyo lakabyada.
Taageero si aad uhesho sawirro aan cadaadin iyo RLE.
Taageero soo kabasho PSD sawir leh qoto dheer 1, 8, 16, 32 jajab halkii kanaal.
Taageero soo kabasho PSD sawir leh qaab midab leh bitmap, grayscale, index, RGB, CMYK, mutlichannel, duotone, lab.
Taageero lagu dayactirayo PSD iyo faylalka PDD ee ku jira warbaahinta la musuqmaasuqay, sida diskiga diskiga, Zip saxannada, CDROM-yada, iwm.
Taageero si loo dayactiro qayb ka mid ah feylasha sawirka Photoshop.
Ku taageer isdhexgalka Windows Explorer, markaa waad ku dayactiri kartaa feylka sawirka Photoshop oo leh menu macnaha guud ee Windows Explorer si fudud.
Taageero si loo helo oo loo xusho PSD iyo faylasha PDD oo lagu hagaajinayo kombiyuutarka macmiilka.
Isticmaalka DataNumen PSD Repair inuu ka soo kabsado Sawirada Photoshop ee Burburay
Marka Photoshop PSD faylasha sawirada ayaa waxyeelo ama musuqmaasuq sababo kala duwan awgood oo si caadi ah ugama furi kartid Adobe Photoshop, waad isticmaali kartaa DataNumen PSD Repair si loo baaro PSD faylasha iyo soo kabsadaan xogta faylasha sida ugu macquulsan.
Fiiro gaar ah: Kahor intaadan soo ceshan wixii dhaawac ama musuqmaasuq ah PSD Fadlan la soco DataNumen PSD Repair, fadlan xir Photoshop iyo wixii kale ee codsiyo ah ee laga yaabo inay galaan faylka.
Xullo waxyeelada ama musuqmaasuqa PSD faylka la dayactirayo:
Waad ku dari kartaa PSD si toos ah magaca faylka ama guji kan
badhanka si aad u hesho PSD faylka lagu hagaajinayo kombiyuutarka deegaanka.
Marka la eego, DataNumen PSD Repair iskaan isha PSD faylka, soo kabso sawirka isku-dhafan iyo lakabyada, oo u kaydi iyaga sidii faylal sawir oo gooni ah. Faylasha muuqaalka ee la soo helay waxaa lagu soo saaray galka la yiraahdo xxxx_recovered, halkaasoo xxxx uu yahay magaca isha PSD faylka. Tusaale ahaan, il ahaan PSD faylka Waxyeellopsd, Diiwaanka soo-saarka asalka ah ee feylasha sawirada la soo helay ayaa Damage_recovered. Haddii aad rabto inaad isticmaasho magac kale, markaa fadlan dooro ama u dhig si waafaqsan:
Waxaad ku dari kartaa magaca galka si toos ah ama guji kan
badhanka si aad u isticmaashid oo aad u xulato galka.
batoonka, iyo DataNumen PSD Repair doonaa start iskaanka iyo hagaajinta isha PSD faylka. Bar horumarka
Nidaamka dayactirka ka dib, haddii isha laga helo PSD faylka waxaa lagu hagaajin karaa si guul leh, sawirka isku darsan iyo lakabyada ku jira PSD faylka waxaa lagu keydin doonaa galka wax soo saarka ee kuqoran talaabada 3-aad. Waxaadna arki doontaa sanduuqa fariinta oo sidan ah:
Hadda waxaad furi kartaa feylasha muuqaalka la soo helay ee ku jira galka wax soo saarka ee codsiyada u dhigma.
DataNumen PSD Repair 2.4 waxaa la sii daayay Diseembar 23, 2020
DataNumen PSD Repair 2.2 waxaa la sii daayay Nofeembar 6th, 2020
DataNumen PSD Repair 2.1 waxaa la sii daayay Juun 11th, 2020
DataNumen PSD Repair 2.0 waxaa la sii daayaa 8da Diseembar, 2013
DataNumen PSD Repair 1.4 waxaa la sii daayay Abriil 24, 2008
Taageero buuxda Windows Vista.
Advanced Photoshop Repair 1.1 waxaa la sii daayay Noofambar 22, 2005
Hagaajinta saxnaanta bogsashada.
Advanced Photoshop Repair 1.0 waxaa la sii daayay 12-kii Luulyo, 2005
Qalab awood leh inuu ka soo kabto sawir Photoshop musuqmaasuq ah (PSD, PDD) faylasha
Dayactir iyo soo kabashada AutoCAD musuqmaasuq ah DWG files
Dayactir iyo soo kabashada Acrobat musuqmaasuq ah PDF files.